sandalwood को तेल अतिप्राचीन समय देखि ज्ञात गरिएको छ। केही स्रोतहरु प्राचीन मिश्र, यो व्यापक embalming लागि रचनाहरूको सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको छ कि दाबी गर्छन्। तर तेल को जन्म ठाउ भारत छ। त्यहाँ, यो धार्मिक उद्देश्यका लागि, साथै मनन समयमा प्रयोग भएको थियो।
यो आवश्यक उपकरण को उत्पादन को लागि सुरु सामाग्री sandalwood को कोर छ। यो पहिलो evaporated छ र जसद्वारा यसलाई फेरि तरल हुन्छ त्यसपछि, वाष्प cooled छ। sandalwood गर्न तेल उच्च गुणवत्ता को थियो, यो पहिलो परिपक्व हुनुपर्छ। यो प्रक्रिया कहिले काँही धेरै दशकहरु लाग्न सक्छ। यो रकम को उच्च लागत बताउँछन्।
यसलाई अहिले व्यापक perfumery, चिकित्सा र cosmetology मा sandalwood तेल प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यो सम्भव छ किनभने लाभ को एक अधिकता कि सक्रिय ईथर मिश्रित।
पहिले, sandalwood तेल यो एक निस्संक्रामक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ एउटा उत्कृष्ट घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने छ। यो सुनिंनु रोक्छ सुनिंनु कम गर्छ। आफ्नो तेज तीव्र गन्ध रोक्छ जीवाणुहरु। यो सबै यो जरूरी चिकित्सा मा एक sandalwood तेल प्रयोग गर्न बनाउँछ।
दोश्रो, यो उपकरणको सुविधाहरू बीच छैन अन्तिम स्थानमा कब्जा छ र यसको astringent गुणहरू। Sandalwood तेल, sagging तपाईंको छाला सुरक्षित हुनेछ यसलाई फेरि लोचदार बनाउन।
तेस्रो, यो भने हुन पर्छ sandalwood तेल कि - राम्रो बेहोशि औषधि। यो relaxes soothes, टाउको दुखाइ relieves र डर समाप्त। एरोमाथेरापी मा sandalwood तेल को आवेदन एक लामो समय को लागि एक परम्परा भएको छ। तपाईं एउटा सुगन्ध दीपक केही घटेको गिर, पनि घर मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईं दूध, फोम, वा अन्य पायसीकारी मा अगाडि यो dissolving, सुगंध स्नान मा थप्न सक्नुहुन्छ। साथै, यो अक्सर मालिश समयमा प्रयोग गरिएको छ। यसलाई तुरुन्तै छैन अवशोषित, तर छाला अप न्यानो पर्याप्त राम्रो अनुमति दिन्छ।
चौथो, तेल यस प्रकारको aphrodisiacs को समूह मा समावेश गरिएको छ। यसलाई केही हर्मोन उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ जो हाम्रो भावना, को शारीरिक आकर्षण लागि जिम्मेवार छन् जो मा यस्तो प्रभाव छ।
पाँचौं, तेल को peculiarities कुरा, हामी छाला को हेरविचार गर्न दिन्छ लाभ के भूल गर्न सक्दैन। यो सबै सजिलै यो प्राकृतिक उत्पादन सम्हाल्न सक्नुहुन्छ - edema, desquamation हटाउन र उठाने, मुखासे को छुटकारा रही।
छैटौं, sandalwood तेल प्रयोग श्वसन पर्चा रोगहरु संग मद्दत गर्छ। एकदम केहि inhalations, को छुटकारा गर्न दुखेको घाँटी र साँस को सजिलो लाग्छ।
सातौं, आफ्नो बाल रंग र यसको पूर्व मात्रा गुमाए भने, मद्दत को लागि कल एक अत्यावश्यक उपकरण हो। यो मात्र होइन nourishes, तर पनि जरा बलियो बनाउँछ। केश कुल्ला यो मात्र आवश्यकता लागि sandalwood तेल पानी धोए छ। यो सामान्यतया प्रति तरल को लीटर 10 घटेको लिइएको छ।
हालैका वर्षहरूमा अफ्रिका छुट्टी मा जा, धेरै sandalwood तेल मिश्र बाट ल्याए। यो आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई ठूलो उपहार हो। आखिर, तिनीहरू सास फेर्न सक्छन्, तपाईं एक स्नान संग, लाग्न सक्छ यो एक ईेशनर र एक क्रीम रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सही प्रयोग गर्न - Sandalwood तेल धेरै समस्या, मुख्य कुरा तपाईं बचत हुनेछ।
कालो currant र contraindications को उपयोगी गुण: को संरचना र उपचार
दबाइ 'Prostanorm'। निर्देशन
कसरी गियर बेभेल बारे?
Meatballs र सस संग मसले आलु - एक हार्दिक र धेरै स्वादिष्ट पकवान
फिस्टल - यो के छ? फिस्टुला उपचार लोक उपचार। लिगेरिस्ट फिस्टल
Keta: क्यालोरी, राम्रो सुविधाहरू रोचक तथ्यहरू, पकाउने व्यञ्जनहरु
फ्रान्सेली फ्राइज: "चियर्स" को लागि एक निर्धारण
सुत्ने आँखा मा पट्टियाँ - राम्रो छुट्टी लागि आदर्श